Shirkadaha Muuqaalada Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Shirkadaha Aaladda Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada
Arbacada, Maarso 10, 2021 Isniin, Maarso 15, 2021 Douglas Karr
Haddii aad tahay urur ballaadhan, waxaa caadi ahaan jira lix qaybood oo muhiim u ah barnaamijka ganacsiga ee aad had iyo jeer u baahan tahay:
Kala-sarraynta Xisaabta - laga yaabee muuqaalka ugu badan ee laga codsado goob kasta oo ganacsi inuu yahay awoodda lagu dhisi karo kala sarraynta xisaabta xalka. Marka, shirkad waalid waxay daabici kartaa iyagoo metelaya astaan ​​ama xayeysiis hoosta ku yaal, marin u hela xogtooda, ka caawisa dejinta iyo maaraynta xisaabaadyo badan, iyo xakamaynta marin u helka.
Hawlaha Ansixinta - ururada shirkaduhu waxay caadi ahaan leeyihiin lakabyo ogolaansho ah si ay ula macaamilaan taxanaha sharciga, sharciyeynta, iyo wada shaqeynta gudaha Cusboonaysiinta warbaahinta bulshada, tusaale ahaan, waxay u guuri kartaa xiriiriyaha una noqon kartaa naqshadeeye muuqaal, maamule, sharci, dib ugu noqosho tifaftire, iyadoo loo sii marayo daabacaad. Ku qabashada kuwan gacan-ka-qabashada iyada oo loo marayo emayl ama xaashiyaha ayaa ka bixi kara xakamaynta
U hoggaansamida, Amniga, Guda, iyo Kaydinta - Shirkadaha aadka loo xakameeyo ama shirkadaha dowliga ah, amniga ayaa muhiim ah sidaa darteed barnaamijyada sida caadiga ah waxaa looga baahan yahay inay maraan habsocodka hanti-dhowrka ee dhinac saddexaad, waxayna leeyihiin kaydinta gudaha iyo keydinta howlaha nidaamka.
Hal Saxeex (SSO) - Shirkaduhu waxay rabaan kantaroolka gudaha ee codsiyada ee ay galaan si ay u galaan barxadda waxaa caadi ahaan lagu maareeyaa waaxda IT-ga ama barxadda xafiiskooda.
Koontaroolada marinka - Doorarka iyo rukhsadaha ayaa muhiim u ah softiweerka shirkadda si loo hubiyo in qofna uusan dhaafi karin howlaha la oggolaaday ama uusan sameyn karin ficillo aan loo idmin.
Heshiisyada Heerarka Adeegyada (SLA) - Goob caalami ah, waqtiga la qabtaa waa mid muhiim ah sidaa darteed heshiiska la isku raacay ee SLA ayaa sida caadiga ah looga baahan yahay inay heshiis la saxeexato goob kasta oo ganacsi. Sidoo kale, dayactirka iyo waqtiga shaqada ayaa si guud loo soo bandhigaa si loo hubiyo inaysan faragelin howlaha.
Taageero Luqad Multi-Language - Waxaan ku nool nahay dhaqaale caalami ah, sidaa darteed awoodda aan ku taageeri karno luqado kala duwan oo ku dhex jira barta adeegsadaha adeegsadayaasha iyo sidoo kale in lagu daabaco luqado badan ayaa muhiim ah. Nasiib darrose, luqadaha midig-bidix badanaa waa fikrad ka dib markii loo eego cabbirka ka dibna way adag tahay in dib loo noqdo oo dib loo farsameeyo xalka.
Aag Waqti Badan - Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto sida shirkadaha da 'yarta ah aysan tixgelin u siin aagagga waqtiga marka ay daabacayaan isgaarsiinta. Marka laga reebo dejinta isticmaale walba aaggooda waqtiga gudaha, ma jadwal u sameyn kartaa isgaarsiintaada bartilmaameedka aaga waqtiga bartilmaameedka la doonayo? Shirkado badan ayaa leh xisaab-ballaadhan oo aag-goobeed ah halkii ay ku dari lahaayeen aagagga waqtiga oo dhan.
Isdhexgalka - Isdhexgalka Barnaamijyada Barnaamijka (APIs) iyo isku-dhafnaanta wax soo saarka ee nidaamyada kale ayaa muhiim u ah otomaatiga, helitaanka xogta, iyo warbixinta waqtiga-dhabta ah.
Caymiska - Waxaan ku nool nahay adduun dacwadeed, marka shardiga ah in barxad ay leedahay caymis ballaadhan oo lagu daboolayo wixii dacwad ah sidoo kale waa lagama maarmaan gudaha barnaamijyada softiweerka shirkadda. Waxaa laga yaabaa in barxadda la jabsaday oo dacwadaha laga soo qaado macaamiisha dhammaadka ah… bixiyahaaga ayaa laga yaabaa inuu mas'uul ka yahay inuu daboolo kharashyada.
Isgaarsiinta Warbaahinta Bulshada ee Enteprise
Mid kasta oo ka mid ah kor ku xusan wuxuu u baahan yahay in lagu daro barnaamijkaaga warbaahinta bulshada haddii aad tahay shirkad ganacsi. Baraha bulshada sida caadiga ah waxay leeyihiin astaamaha soo socda:
Maareynta Habka - Awoodda looga dhex dhalin karo isku xigxiga koox ka mid ah dadka isticmaala nidaamka ilaa koox kale ayaa muhiim ah. Adeegsade kasta wuxuu leeyahay doorarkiisa iyo rukhsad u gaar ah oo xaddidaya awooddooda. Tusaalooyin:
Calaamaddaada ayaa lagu xusay internetka (iyada oo aan la calaamadin ama aan la calaamadin). Codsiga ma loo rogi karaa iibinta haddii ay tahay baaritaanka rajada? Taageerada macaamiisha haddii ay tahay arrin macaamiil ah? U suuqgeyn haddii ay tahay codsi warbaahin ah?
Waxaad leedahay jadwal olole oo ku daraya daabacaadda bulshada oo leh waqti go'an oo qeexan. Miyuu barnaamijkaaga warbaahinta bulshada kiciyaa oo safku u shaqeeyaa kaas oo u dhex maraya kooxdaada ka kooban, sawiradaada ama kooxda fiidiyowga, kooxdaada sharciga ama maamulka, illaa oggolaanshaha iyo jadwalka?
Jadwalka iyo Kalandarka - Heer shirkadeed iyo heer hoosaad, si fudud ma u kala shaandheyn kartaa oo u ilaalin kartaa kalandarkaaga warbaahinta bulshada oo aad hawlo u xilsaari kartaa?
Dhageysiga Bulshada iyo Falanqeynta Dareenka - Heer shirkadeed iyo heer hoose, miyaad geyn kartaa ololeyaal dhegeysi bulsho oo loogu talagalay dadka, wax soo saarka, iyo warshadaha oo ay la socdaan falanqaynta dareenka? Si dhakhso leh ma u marin kartaa codsiyada gudaha si aad ugu digto kooxda ku habboon inay ka jawaabaan? Ma ka warbixin kartaa dareenka waqtiga ka dib si aad u hubiso inaad xiriir wanaagsan la leedahay macaamiishaada?
Isdhexgalka - Miyaad ka shaqeyn kartaa bartamaha dhexe si aad ula xiriirto, fariin ugu dirto, ugana daabacdo marin kasta oo warbaahinta bulshada ah iyo koontada aad ka maamusho heerka shirkadaha ama heerka hoose. Xogta dib ugama celin kartid taageerada macaamiishaada ama nidaamka xiriirka macaamilka haddii ay jiraan codsiyo? Miyaad riixi kartaa weydiimaha iibka nidaam si aad uga caawiso aqoonsiga rajada iyo isku xirka dhibcaha u dhexeeya ololayaasha iyo kobcinta iibka?
Isdhexgalka Safarka - Miyaad karti u siin kartaa kicinta safarada macaamiisha ee omnichannel iyo dhacdooyinka xiriiriyahaaga xiriirka warbaahinta bulshada oo ah cunsur wax ku biirisa?
Barashada Mashiinka - Ka faa'iideysiga AI si loo helo aragti qoto dheer oo ku saabsan astaanta guud, wada sheekaysiga khadka tooska ah, ka qayb qaadashada farriimaha gaarka ah (keywords, sawirka), iyo suurtagalnimada soo iibsiga, kor u qaadista, ama haynta.
Warbixinta iyo Dashboardka - Hawlaha oo dhan, miyaad abuuri kartaa warbixinno adag oo heer shirkadeed iyo heer hoose ah oo si fudud loo kala shaandhayn karo, loo kala qaybin karo, ka dibna la barbar dhigi karo waxqabadka ololayaasha, xilliyada, ama xilliyada gaarka ah?
Astaamahani waxay u dheer yihiin astaamahaaga caadiga ah ee warbaahinta bulshada ee awood u siinaya otomaatiga, hagaajinta, jadwalka, iyo isku darka dadaalkaaga warbaahinta bulshada.
Istuudiyaha Bulshada ee Salesforce
Istuudiyaha Bulshada ee Salesforce wuxuu bixiyaa dhammaan astaamaha loogu baahan yahay Maareynta Warbaahinta Bulshada ee Enterprise, oo ay ku jiraan:
Maamulka - maareynta isticmaaleyaasha iyo marin u helka alaabada Salesforce.
Daabac - awoodda jadwalka iyo daabacaadda akoonnada iyo kanaalada badan.
Ka qaybgal - awood u lahaanshaha dhexdhexaad iyo ku biirista wada hadalka, ka dibna socodsiinta socodka shaqada adeegga ama iibka.
Falanqeeyaan - kormeer oo dhegeyso xisaabaadka la leeyahay oo ka hel aragti guud warbaahinta bulshada ee ku saabsan ereyada muhiimka ah iyo dareenka.
Sirdoonka Artificial - Salesforce Einstein waxaa loo isticmaali karaa in si toos ah loogu kala saaro sawirada astaamo si loo helo aragti qoto dheer oo ku saabsan ka qeyb qaadashada.
Waa Maxay Barnaamijka Ugu Wanaagsan ee Warbaahinta Bulshadu?
Dhammaan barnaamijyada warbaahinta bulshada looma abuurin muuqaal kasta oo aad aragto ee kor ku xusan. Waxaan had iyo jeer ku dhiirrigeliyaa macaamiishayda inay maraan tallaabooyin isku xigxiga markii maalgashiga tikniyoolajiyadda suuqgeynta taas oo aan inta badan ku jirin caan ka noqoshada barxadda, abaalmarinteeda, ama aqoonsigeeda shirkadaha saddexaad.
Ka bilow Himilooyinkaaga - maxaad isku dayeysaa inaad ku guuleysato barmaamijka warbaahinta bulshada? Fahmaan dhibaato, saameynta ay ku leedahay ururkaaga, iyo qiimaha ay xalka weyn ka bixin laheyd. Taasi waxay ku dari kartaa keydinta otomaatiga gudaha, go'aan qaadashada fiican ee xogta waqtiga-dhabta ah, ama sii-haynta oo sii kordheysa iyada oo ay ugu wacan tahay khibrad macmiil oo ka wanaagsan.
Go'aami Kheyraadkaaga - waa maxay ilaha gudaha (dadka, miisaaniyadda, iyo waqtiga) ee ay tahay inaad u guurto barnaamijka cusub. Ma leedahay dhaqan korsasho? Ma leedahay koox mari kara culeyska barashada iyo u guurista nidaam cusub?
Aqoonso Nidaamka Hadda - ka hubi kooxahaaga gudaha maamulka illaa shaqaalahaaga macaamiisha ah ee ku wajahan geeddi-socodka warbaahinta bulshada ee aad hadda ku jirto. Fahmaan meesha jahwareerka ku jiro iyo sidoo kale qadarinta barnaamijyada hadda socda iyo howlaha socda. Tani waxay hubin doontaa inaad dooratid xalka hagaajinaya dadaallada ururka halkii aad dhaawici lahayd. Tan waxaa laga dhigi karaa liis hubin oo kala duwan oo lagu qiimeynayo barnaamijkaaga soo socda ee warbaahinta bulshada.
Qiimee Iibiyeyaashaada - Isbarbar dhig kheyraadkaaga iyo howlahaaga iibiye kasta oo hubi inuu buuxinayo dhammaan awoodaha jira ee aad u baahan tahay. Waxaa jiri kara habab qaarkood oo u baahan ka shaqeynta inta lagu guda jiro hirgelinta ama hijrada… laakiin isku day inaad aqoonsato sida aad u fulinayso geeddi-socod kasta si faahfaahsan si loo yareeyo halista korsashada.
Cabir Fursadda - Haddii aad maalgashi ku sameyneyso barnaamijyo kala duwan, waxay caadi ahaan yeelan doonaan astaamo cusub oo siinaya fursad lagu wanaajiyo soo noqoshadaada maalgashiga tikniyoolajiyadda.
Ku wareejinta dadaalkaaga warbaahinta bulshada ee shabakad cusub waxay noqon kartaa maalgashi aad u wanaagsan oo abaalmarin ah oo ku saabsan dadaalka iibka dhijitaalka ah iyo dadaalka suuqgeynta ee shirkaddaada. Xullo xulo Choose hana ka waaban inaad la shaqeyso a la taliyaha ama falanqeeye aqoon u leh warshadaha oo kaa caawin kara inaad qiimeyso oo aad doorato iibiyahaaga xiga.
Tags: ganacsiga bulshadamuuqaalada warbaahinta bulshada ee shirkaddashirkadaha warbaahinta bulshadabulshada crmwarbaahinta bulshadafalanqaynta warbaahinta bulshadakeydinta baraha bulshadau hoggaansanaanta warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada crmmaaraynta xiriirka xiriirka macaamiisha warbaahinta bulshadamadal suuqgeynta moobiilka ee warbaahinta bulshadadhexdhexaadinta warbaahinta bulshadakormeerka warbaahinta bulshadadaabacaadda warbaahinta bulshadasharciyeynta warbaahinta bulshadajadwalka warbaahinta bulshadaiskuxirka warbaahinta bulshadasocodka warbaahinta bulshada
Kamua: Ka Faa'iidaysiga AI Si Aad U Qalabeysid Foomamka Awood Bixiyaha
Isbedelada Naqshadeynta Emailka ee 2021
May 20, 2013 at 10: 59 AM
Hey Doug, dib u eegis weyn! Shoutlet waa madal aad u awood badan, taasi waa hubaal! Waxaan rajeynayaa inaad fiicantahay.